Taageerayaasha Arsenal oo xushay xiddiga ay u arkaan inuu u qalmo inuu noqdo kabtanka joogtada ah ee kooxda – Gool FM
(London) 31 Okt 2019. Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa wxay xalay u aheyd habeen niyadjab ah, kaddib markii ay isaga soo hareen koobka Carabao Cup, kulan aad u xiiso badnaa ay naadiga Liverpool ku wada ciyaareen garoonka Anfield.
Liverpool ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay Arsenal kaga adkaatay, rigoorayaal 5-4 ah, xilli 90-ka daqiiqo ee ciyaarta ay ku soo idlaatay barbaro 5-5 ah, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-ka ee tartankan.
Taageerayaasha Gunners ee daaafaha caalamka ayaa ka fal celiyay muqaal kale ee la xiriira dhacdada ciyaartii xalay, kaddib markii ay kaamirooyinka soo qabteen Héctor Bellerín oo xalay ahaa kabtanka kooxda Gunners inta aysan labada kooxood soo galin gudaha garoonka, isagoo siibay jaakatkiisa isla markaana siiyay mid ka mid ah carruurtii ku sugneyd garoonka, kaasoo u muuqday inay saameyn ku yeelatay cimilada qabowga ahaa ee jiray.
Fal celinta taageerayaasha kooxda reer London ee Arsenal ayaa waxay imaaneysaa maalmo yar kaddib dhibaatadii ka dhex dhacday iyaga iyo kabtanka joogtada ah Gunners ee Granit Xhaka inta lagu gudi jiray kulankii Crystal Palace ee horyaalka Premier League.
Xiddiga reer Switzerland ee Granit Xhaka ayaa fal celin xun sameeyay kaddib markii la badalay qeybta labaad ee kulankii Crystal Palace, wuxuu geystay aflagaado iyo tilmaamo la socda, wuxuuna kaddib dhulka ku tuuray maaliyadiisa kooxda Arsenal.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo xigatey dhowr aragtiyood ee taageerayaasha Arsenal ah, kuwaas oo inta badan diiradda saarey baahida loo qabo in Héctor Bellerín loo magacaabo kabtanka joogtada ah ee kooxda, waxayna tilmaameen in arrintan ay tahay tusaale ku dayasho mudan.
Kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club oo galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow